Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanindronana HTML? - Mangataha Semalt!
Ireo tranonkala sy bilaogy dia voasoratra amin'ny HTML; Midika izany fa ny tranonkala tsirairay dia ny tahirin-javatra mifandraika amin'ny code code hafa ao anatiny. Indraindray dia mora ny manaisotra na manakona ny angona avy amin'ny tranonkala iray ary mamonjy azy amin'ny endriky ny endrika, ary indraindray dia tsy maintsy mampiasa an'ity fitaovana HTML ity isika. Ny tranonkala sy ny bilaogy dia tsy manome ny angona ao anaty format CSV sy JSON foana, ary izany no antony ilantsika ny fampiasa HTML iray. Amin'ny alalan'ity fomba fiasa ity, ireo fitaovana rindrambaiko isan-karazany dia manitsy ireo tranonkala ahafahana mahazo vaovao azo antoka sy voalamina, mamonjy fotoana sy vola be ho antsika.
Ireo toetra mampiavaka ny HTML:
Misy fomba samihafa amin'ny fanesorana HTML na angona angon-drakitra any amin'ny tsenambola, ary ny fanalana ny HTML dia iray amin'ireo olona malaza indrindra. Ny toetra miavaka na ny toetoetrany dia voalaza etsy ambany - no deposit casino usa bonus codes.
1. Manaova tahirin-kevitra be dia be avy amin'ny sehatra fitantanana votoaty samihafa:
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny alàlan'ny HTML dia afaka manangona toerana maro amin'ny WordPress. Na dia misy orinasa iray aza mivoatra amin'ny sehatra fitantanana hafa, dia azonao atao ny miditra izany daty izany ary manaparitaka izany amin'ny HTML.
2. Mamolavola sy mandamina ny angon-drakitra:
Ny fanariana HTML dia nanjary teknika malaza amin'ny webmasters, programmers, ary web developers. Mampiasa an'io fomba io izy ireo mba handrafetana fampahalalana hafahafa ary hitahiry izany amin'ny endrika takona ahafahana mampiasa azy.
3.Manohana ny format isan-karazany izy:
Na dia voarakitra ao anaty tahadika na tahirin-databary foana aza ny angon-drakitra voatahiry, ny zavatra mahaliana dia ny famerenana HTML ny tahirin-kevitra ao amin'ny rakitra manokana na ny fitaovana fitahirizana rahona. Ity karazana tolotra ity dia miasa amin'ny tranonkala mifototra amin'ny tranonkala ary mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala mavesatra ihany. Mamboly sy manomana lahatsoratra sy sary ho an'ny mpampiasa izany.
4. Tsara ho an'ny dokam-barotra amidy sy zavatra hafa:
Afaka manangona angon-drakitra avy amin'ny dokambarotra sasantsasany, pejin'ny jiro , torohay, tranokala e-commerce ary bilaogy manokana. Loharanom-baovao hafa mahagaga dia ny media sosialy; Ny fanarabiana HTML dia midika fa ny fampiasana ny media sosialy sy ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra ho an'ny fijerinao.
5. Tsara ho an'ny mpampiasa Twitter:
Misy mpisera maherin'ny 300 mahery ao amin'ny Twitter, ary tsy azo atao izany ho an'ny mpangalatra tsotra hanakanana ny angon-drakitra rehetra avy amin'io tranonkala tambajotra sosialy. Na dia izany aza dia afaka manatanteraka io asa io ho anao ny grate HTML iray ary afaka manasitrana ny vahinin'ny fanazavana amin'ny endrika endrika sy bitsika.
6. Mifanaraka amin'ny servere web izany:
Ny rindrambaiko HTML dia mifandray amin'ny serivisy ao anaty tranonkala mitovy amin'ny tranonkala maromaro, mandray ny fampahalalana sy fangatahana fangatahana mandritra ny andro. Raha tokony hampiseho ny angon-drakitra eo amin'ny efijery ianao dia hamerina ny fampahalalana ao amin'ny tahiry tahiry ao an-toerana na ny tahiry ho an'ny fampiasana amin'ny manaraka.
Mazava fa afaka manamboatra sy manakona pejy maro isan-karazany ny mpandrafitra HTML, ka manome anao ny kalitao tsara indrindra ao anatin'ny fotoana fohy. Raha tsy misy izany dia tsy azonao atao ny mijery ireo tranonkala goavam-be ary tsy afaka mampitombo ny asanao amin'ny aterineto. Izany no antony tokony handoahanao vola amin'ny endriny HTML iray izay mampanantena ny vokatra tadiavinao ao anatin'ny segondra na minitra.